Ọrịa na US, Israel, Palestine! Olee na-adị ndụ? Womenmụ nwanyị 3 na-akọ akụkọ ha
Home » Na-agbasa News Travel » Ọrịa na US, Israel, Palestine! Olee na-adị ndụ? Womenmụ nwanyị 3 na-akọ akụkọ ha
Wa na-abịakọta ọnụ. Coronavirus amaghi oke ala, enweghị ebere ma chọọ igbu. N'otu oge ahụ, COVID-19 nwere ike ịbụ ohere kacha mma anyị nwere maka udo zuru ụwa ọnụ na ịbịakọta ọnụ. Agha Worldwa a nwere naanị otu onye iro a na - adịghị ahụ anya - na ụmụ mmadụ niile nọ n'otu akụkụ nke esemokwu ahụ.
N'ihe dị ka n'ehihie Mọnde, e gosiwo na ụfọdụ ihe dị ka 1.925,179 nke coronavirus n'ụwa niile. Ọ dịkarịa ala ndị 119,701 nwụrụ site na COVID-19, 447,821 gbakee.
Ọrịa nke nje ahụ kpatara - na iri puku kwuru iri puku nọ n'ọnọdụ dị egwu. Ọrịa ahụ akpatawo mbibi akụ na ụba zuru ebe niile, bụ nke nwere ike ịmalite ịmalite nghọta kpamkpam ozugbo ntiwapụ ahụ.
Ruo mgbe ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi n'ụwa ka nọ n'okpuru ọkwa dị iche iche nke mkpọchi, na-egbochi ọtụtụ ịhapụ ụlọ ha. N’ezie, nhụjuanya anyị gafere nanị karịa ndị ọrịa butere. Odi ole na ole, ma oburu na ha, bu ndi anabataghi ihe isi ike, bu eziokwu nke wetaara anyi nnoo anya obughi nani ngwangwa ndi anyi nwere kama, karia, mmadu anyi ekesara.
Nke a bụ ndị gosipụtara na COVID-19 gosipụtara, atọ n'ime ha kọọrọ akụkọ ha na The Media Line. Nke a bụ akụkọ atọ dị ịtụnanya sitere na ụmụ nwanyị 3 na mba atọ: USA, Israel na Palestine.
Nwere ike ịgwa anyị ntakịrị ihe gbasara onwe gị?
Amuru m ma zulite na Denver, Colorado, mana ugbua bi na Los Angeles. Ana m arụ ọrụ dịka azụmaahịa azụmaahịa na onye ọka iwu, na-elekwasị anya na ohere anaghị aba uru. Ana m eje ozi na ndị isi oche nke ụlọ ọrụ ọha na eze yana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ na mpaghara na mba.
Courtney Mizel. (Site n'ikike)
Gini mere i jiri chee na i butere coronavirus?
Anọ m na-echegbu onwe m nke ukwuu banyere mgbanwe niile ewepụtara iji gbochie mgbasa nke COVID-19, gụnyere ịkagbu ụlọ akwụkwọ, usoro ịnọ n'ụlọ na ihe niile so na ya. E nwere ụbọchị ole na ole m tụrụ ụjọ - mgbe iku ume m siri ike karị - echekwara m banyere onye m nwere ike ịkpọ ka ọ lekọta ụmụ m ma ọ bụrụ na m ga-aga ụlọ ọgwụ. Ka m na-ele ihe na-eme ndị na-arịa oke ọrịa gburugburu ụwa, ana m enwe ekele maka eziokwu ahụ bụ na ikpe m dị nwayọ. A na m ewere onwe m n’otu n’ime ndi ihe oma.
Amaghị m ma ọ bụ na ọ bụ n'ezie coronavirus n'ihi na m gara na [American Israel Public Affairs Kọmitii] ogbako na [Washington,] DC, na mgbe ahụ na Colorado. Ebe ọ bụ na m na-eme njem, ebe ọ bụ na ịnya ahụ ọkụ anaghị ahụ m, dọkịta m tụrụ aro ka m nwalee na Cedars-Sinai [Medical Center], nke m mere na Machị 14. Nke a bụ na mbido ihe niile, [mana] ha bụ ka na-agbanwe agbanwe banyere inye ule coronavirus n'ihi ụkọ nke dị adị.
O were ụbọchị isii - rue Machị 20 - ị nweta nsonaazụ m. A sị na emeghị m mgbochi, anaghị m ama mmadụ ole m gaara ebute.
Kedu ihe bụ mmeghachi omume mbụ gị mgbe ị nyochachara nke ọma?
Akpata oyi wụrụ m. Ahụ ọkụ m bụ nanị degrees Celsius 100.6 ma na-ewe naanị ụbọchị abụọ ma ọ bụ ụbọchị atọ.
Site na ihe m maara, ndị mmadụ na-akọ banyere oke ọkụ. Enwere m mgbochi n'ime obi m na, n'ozuzu, enwere m ike ọgwụgwụ. Oge m nwetara nsonaazụ m, ọtụtụ mgbaàmà m agbadatala.
Amalitere m imega ahụ́ ma nwetakwuo onwe m ruo n’ókè nke ịga ụlọ ọgwụ.
Ì chere na ndị ọchịchị US na-eme ule zuru ezu?
Ihe kachasị dị ize ndụ bụ ọbụna onye nwere mgbaàmà m nke nwere ụkwara ume ọkụ nwere ike ọ gaghị [mezuo njirisi] iji nwalee ya. Generally ga-abụrịrị ihe karịrị afọ 65, nwee ọnọdụ ndị ka njọ, ma ọ bụ mara na ekpugherela gị ozugbo. …
Na-enweghị ọtụtụ ebe ule ma ọ bụ stricter mmanye nke kwarantaini ụkpụrụ nduzi dị ka Israel, Ahụghị m otú anyị [na US] na-aga ịkwụsị mgbasa nke nje. Ọ bụ uto too dị oke egwu.
Olee otú ụmụ gị siworo meghachi omume?
Childrenmụ m, Zoe, 14, na Isabella, 13, nwere nchegbu. Ha jụrụ, sị: “Ànyị nwere ike ịgwa ndị enyi anyị ọ bụla. Co Coronavirus abughi ihe anyi kwesiri imechu ihu. … M na-anọkarịkarị n'ọnụ ụlọ ihi ụra na ọfịs m, nke dị n'ụlọ. Mgbe m nọ gburugburu ụmụaka na ebe ndị nkịtị, m ga-eyi nkpuchi ma na-akwọ aka m mgbe niile.
Courtney Mizel (R), ya na ụmụ Zoe na Isabella. (Site n'ikike)
Ndụmọdụ dị a youaa ka ị nwere maka ndị ọzọ na-ata ahụhụ a?
Ihe kachasị mma mmadụ niile nwere ike ime bụ ilekọta usoro ha ji alụ ọgụ na ezinụlọ ha. Ndị mmadụ kwesịrị ịkọrọ ndị dọkịta ha tupu ha agaa ụlọ mberede ma ọ bụ nwaa ịnwale.
Enweghị nkpuchi maka ndị ọrụ ahụike. Ihe omuma a amaghi. Na Israel, ntuziaka si n'elu. N'ebe a, onye isi ala, ndị gọvanọ, na forlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na-ekwu ihe niile dị iche iche. Ọ jọgburu onwe ya ma na-ebute ọgbaghara maka onye ọ bụla.
Enwere otutu n’ime anyị ndị butere nje a na ọtụtụ ndị amaghi na ha nwere ya. Ọnọdụ ahụ na-akpakọba nzuzu ma ndị mmadụ na-atụ ụjọ na ha anaghị enweta ntuziaka doro anya. Yabụ, na ha na-akpachapụ anya ma ọ bụ na-agbachi nkịtị ma na-eleghara [nsogbu] anya.
Biko ị nwere ike ịme onwe gị nkenke
M [kwagara Israel] obere obere afọ atọ gara aga. M si na New Jersey ma na-akụzi akwụkwọ bekee na Mahadum Bar-Ilan.
Carra Glatt. (Site n'ikike)
I kwuru na ị nọ na US ma laghachi na Israel. You ga-anọrọ onwe gị ruo ụbọchị iri na anọ?
Otu ihe na-akpali mmasị na nke ahụ: M laghachitere tupu - dị ka nkịtị 12 awa tupu - na [gọọmentị emejuputa atumatu] na ọ bụghị retroactive. Ọ dabara nke ọma, anọ m na-akpọpụ iche n'ụlọ iji nwee nchebe. Ma nyochawa adịghị m. Ọ bụ obere uche. …
Ebee ka i chere ị nwere ike bute nje ahụ?
Anọ m na New Jersey na-eleta ndị ezinụlọ m. Echere m na m nwetara [coronavirus] n'aka nna m ma ọ dịghị mgbe a nwalere ya n'ihi na anyị amaghị n'ezie. Ihe mere m ji chee na ọ bụ n'ihi na o nwere ezigbo enyi ọ ga - apụ maka nri ehihie na onye, ​​ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, merụrụ ụlọ ọgwụ.
Tupu m gawa Israel, nna m nwere ọrịa na-efe efe. Ọ gara dọkịta na, karịa ịnye ya nyocha coronavirus, ha buru ụzọ nye ya ule flu, nke dị mma. O mere X-ray obi ya ma dibia ahu si, “Ehee, nke ahu doro anya, ya mere anyi agaghi anwa gi [nje virus a].” Ozugbo a chọpụtara m, ọ dị ka ọ ga-abụ na o nwere ya. Ka ọ na-erule mgbe ahụ, ọ kpọrọ [dọkịta ahụ] ọzọ wee gwa ya, sị, “Ọfọn, ị nweghị ahụ ọkụ ọzọ ka anyị agaghị anwale gị.”
Ná ngwụsị nke njem m, ekwesịrị m ịga nzukọ ọgbakọ mba ụwa na New Orleans na mgbe ahụ [gọọmentị Israel kpebiri na onye ọ bụla] nke mere nke ahụ ga-abanye iche iche mgbe ọ laghachiri mba ahụ. … Site mgbe ahụ gawa, ahapụghị m ụlọ ndị mụrụ m. M dị ka, "M na-dị nnọọ aga m mara mma nke ukwuu ịnọ ebe a na-adịghị ekpughe onwe m ndị mmadụ." Naanị ebe ọzọ enwere ike bute m bụ ụgbọ elu [laghachi Israel], mana anụbeghị m ihe ọ bụla gbasara [ndị njem] na-arịa ọrịa.
Nwere ike ịkọwa ihe ndị ị mere ozugbo ị malitere inwe mgbaàmà?
Mgbe m laghachiri Israel na United States, ana m enwekarị nsogbu jet mara mma. Ma iji chebe onwe m, ana m a myụ ọgwụ m kwa ụbọchị. Alaghachiri m na [Mọnde, Machị 9] ma echere m na ọ bụ gburugburu Tọzdee ma ọ bụ Fraịdee ka m nwetara ahụ ọkụ, ike gwụkwara m. Ya mere, ọ bụ ihe dịka otu izu gachara ka m kpọrọ MADA [Magen David Adom ọrụ mberede] n'ihi na ha gwara gị ka ị kpọtụrụ ha naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ karịa 38 Celsius. Ọ bụ naanị n’ụbọchị ahụ ka m rịara ọrịa.
Nwere ike ịkọwa usoro ịlele?
Mgbe m kpọrọ MADA, ọ bụ, “Pịa 1 maka nhọrọ nkịtị wee pịa 2 maka coronavirus.” Echere m na usoro ahụ agbanweela kemgbe ahụ ma ha na-enyocha ndị mmadụ. Ma n’oge ahụ agwara m ha ihe ọnọdụ okpomọkụ m dị. Ekwuru m na enweghị m mgbaàmà ọ bụla ọzọ [ma ọ bụ isi] ma e wezụga ike ọgwụgwụ. Anaghị m ụkwara ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ha tinyere m na ndepụta wee bịa n'ụtụtụ echi ya. Mmadu abia na ngwa nchebe zuru oke ma nye gi swab na akpịrị na imi. Ọ bụ ezigbo iru ala. Enwetara m nsonaazụ m ụbọchị abụọ ka e mesịrị, ọ wụrụ m akpata oyi n’ahụ n’ihi na n’oge ahụ enwere m mmetụta ka mma.
Nke a ọ mere ka ị mata nke ọma etu esemokwu ahụ siri dị - na ndị enweghị akara ọ bụla nwere ike ịga ahịa ha n'amaghị na ha bu ya?
Eeh. Karịsịa n'ihi na ọ bụrụ na m nọ na US, ọ nweghị ụzọ m ga-esi nwalee. … Amaara m ọtụtụ ndị na-eche na ha nwere ya. Ndị na-enwetaghị ule ahụ nwere ndị dọkịta gwara ha, "Ee, amaara m nke ọma na ị nwere coronavirus." Ahụ m bụ ụdị nke si jetlag wee nweta obere ahụhụ na mgbe ahụ ọ bụ ya. Yabụ, echere m na ọ ga-enwerịrị ọtụtụ mmadụ ndị na-agagharị na ndị na-enweghị ntụpọ ọ bụla na ha butere ya. Site na ihe m ghọtara, nsogbu ọzọ bụ na ndị mmadụ na-efe efe karịa ụbọchị tupu ha amalite ịrịa ọrịa.
I kwuru na gị na onye chọrọ ịlụ gị bi. Ndi ama ọsọn̄ mbufo mbiba idem?
E nwere ihe ezigbo na mgbe ahụ, e nwere ihe ị na-eme na omume. Nke mbu, a nwalere ya n'ezie ma echere m na o bu oria a n'ihi na, n'echeghi echiche, o nwere ukwara ojoo. Ma ọ dịghị mma. Anyị na-anọ n'ọnụ ụlọ dị iche iche mana ebe ọ bụ na anyị nwere naanị otu ime ụlọ ịwụ, enweghị m ike ịnọpụ iche. Anọ m na-ehichapụ elu na ihe niile. Enwere m mmetụta nke ọma karịa ya ma ọ bụ naanị ichere maka ule ọzọ anyị. Anyị nọ na-elekọta mmadụ na-ekewapụ n'ime ụlọ, na-anọ 2 mita iche.
Carra Glatt na onye chọrọ ịlụ. (Site n'ikike)
Agwarala gi ozo?
N’ọtụtụ mba nwere ụle ngwa ngwa, ha anaghị anwale gị ma ọlị. Naanị ihe ha na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ ruo ụbọchị atọ ma ọ gafeela otu izu ma ọ bụ abụọ site na mmalite nke mgbaàmà, ị nwere ike ịpụ. N'Israel, aghaghị m ịnweta nsonaazụ ule abụọ na-adịghị mma tupu a kpochapụ m.
Lọ ọrụ inshọransị ahụike m na-akpọ m ugboro abụọ n’ụbọchị iji lelee, na oge ụfọdụ mgbe enweghị ahụ ọkụ m, mmadụ gwara m, “Ana m etinye gị na ndepụta ahụ na MADA ka a nwalee gị ọzọ.” Mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, akpọrọ m MADA, mana ha kwuru na anọghị m na ndepụta ọ bụla. Anọ m na-aga azụ na azụ ma echere m na enwere nghọtahie. Ma kpọmkwem izu abụọ mgbe mbụ m jụrụ, MADA kpọrọ m kwuo na a ga-anwale m n'echi ya. Yabụ, nke ahụ bụ ụdị nkụda mmụọ. Mana, n'ikpeazụ, enwetara m ule ọzọ ma adị m mma ugbu a.
Have nwere ozi olileanya ma ọ bụ mmụọ nsọ maka ndị ọzọ na-ata ahụhụ otu ihe ahụ?
Echere m na ị ga-echetara onwe gị na o doro anya na anyị kwesịrị iji nke a kpọrọ ihe. Mana n'otu oge ahụ ịmara na maka ọtụtụ mmadụ [ndị butere nje virus ahụ), nsonazụ ya ga-adị nro. Ihe m na-ekwu bụ na nke a abụghị nke kachasị njọ m hụtụrụla. Enwere m obere egwu na ụjọ. Echere m na ihe kacha siere m ike bụ enweghị ihe m maara mgbe ahụhụ ahụ ga-akwụsị. Ma ọ mere na [ọ ga-amasị ọtụtụ ndị]. Don't maghị oge ọ ga-abụ mana emesia ị [ruo otu oge mgbe ị] nwere ike ịsị, “Nke a bụ ụbọchị m ga-adị mma.”
Mariana Al-Arja, Betlehem, West Bank, Palestine
Biko ị nwere ike ịmata onwe gị?
Aha m bụ Mariana na m onye Palestine nke bi na Betlehem. Ana m arụ ọrụ dịka onye isi njikwa maka Angel Hotel, nke bụ azụmahịa ezinụlọ nwere.
Hotellọ oriri na ọ Angelụ Angelụ Angel, Bethelem, West Bank. (Site n'ikike)
Kedu mgbe ị matara na ị bu nje COVID-19?
Ihe merenụ bụ na anyị nwere ndị otu si Gris na enwere m nchegbu na ebe ọ bụ na ndị njem nleta ka na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu, anyị nwere ike ịhụ ikpe. Otu ụbọchị, enwetara m ekwentị site na onye na-ahụ maka njem njem [anyị na-enweta ndị ahịa si] ndị kwuru na ụfọdụ ndị nọrọ na họtel ahụ site na February 23 ruo 27 chọpụtara na coronavirus mgbe ha laghachiri n'ụlọ.
Amaghị m ma onye ọ bụla n’ime anyị butere ọrịa ahụ. Ya mere, ihe mbụ m mere bụ [ịkpọ oku] ma mesịa ruo n'ụlọ ọrụ mịnịsta na-ahụ maka ahụike [na Ramallah]. Ha gwara m na m ga-akpọlata ndị ọrụ m niile na họtel ka m nwee ike lere ha ule.
Yabụ, ị chọpụtara na ị nwere coronavirus tupu ị nwee mmetụta ọ bụla?
Ee, kpọm kwem. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ụlọ ọrụ njem, agaraghị m ama maka ya. Enweghị m ihe mgbaàmà mana mmadụ ole na ole ndị ọrụ m na-arịa ọrịa na enweghị ike ịbịa rụọ ọrụ n’agbata Febụwarị 27 na Machị 1. Ha nwere imi na akụrụ na-achọ ịnọ n’ụlọ. Nke ahụ bụ tupu anyị amata ihe ọ bụla [banyere ìgwè si Gris].
Qu kewapụrụ gị ugbu a na họtel?
Mba. Thelọ oriri na ọ Theụ isụ ahụ dịzi ugbu a mana ewepụla mmadụ iri anọ n'ime anyị. Enwere ndị si US na ihe karịrị ndị ọrụ iri na abụọ. Anyị nọrọ ebe a bido na mbido Machị 40 na ndị Amerịka lebara anya na Machị 5. Ma, mụ na otu n’ime ndị ọrụ m nọrọ n’izu ọzọ maka na ule ya na-abịaghachi n’ezi.
Mariana Al-Arja, n'ime ọfịs ya n'oge iche iche. (Site n'ikike)
A nwalere onye ọ bụla tupu a hapụ ya ka ọ pụọ?
Ee, anyị ga-enwe nsonaazụ nnwale atọ na-adịghị mma tupu anyị ahapụ ụlọ nkwari akụ ahụ. Emechaa, m laghachiri n’ụlọ m nọrọ ebe ahụ abalị iri na anọ ọzọ wee gafee ule ọzọ.
Nwere nchegbu banyere ịlaghachi ụlọ n'ihi ezinụlọ gị?
Anọ m n'ụlọ ahụ na nne m na nwanne m nwoke, onye bukwa nje nje ahụ. Anyị akpọchighị onwe anyị n’ime ụlọ anyị n’ihi na anyị anwalela nke ọma ugboro atọ. Onweghị ihe ga-echegbu onwe ya. Anyị lekọtara onwe anyị ruo ule nke anọ.
I kwuru na họtel ahụ bụ azụmahịa ezinụlọ. A ga-enwerịrị nsogbu akụ na ụba metụtara ya.
N'ezie. Anyị nwere ahụmịhe dị iche maka na ụlọ nkwari akụ ndị ọzọ niile emechiri mana anyị ga-anọrịrị na-emeghe, nke pụtara ịgbara mmiri, iji ọkụ eletrik, ịtụ ihe n'aka ndị na-eweta ngwaahịa, wdg. Ọzọkwa, m natara ikike ịlaghachi na họtel n'ihi na m ga-akwụ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ m.
Have ga-akwụ ndị ọrụ gị ụgwọ n'agbanyeghị na ụlọ nkwari akụ anaghị arụ ọrụ?
Eeh. Ha nwere ezinụlọ; enyemaka dị ha mkpa. Yabụ, ihe m mere bụ inye ha ọkara ụgwọ ọnwa ọnwa Maachị ma bulie ndị nke ọzọ n'April.
You nwere ọgụgụ isi mgbe ụlọ ọrụ ndị njem na-amalite ịlọghachi?
Ihe ga-emecha laghachi na nkịtị. Ọ ga-arụ ọrụ ma ikekwe dị mma karịa na mbụ. Ma anyị kwesịrị oge dị ukwuu iji gbakee na Betlehem. Echere m na anyị chọrọ ihe dị ka otu afọ ruo mgbe anyị ga-ebili ọzọ n'ụkwụ anyị. [Nsogbu ahụike] abụghị naanị metụtara mpaghara a - ọ bụ ọdụ ụgbọelu niile n'ụwa niile. Onye ọ bụla enweela mmetụta na akụ na ụba, kwa. Yabụ, ndị mmadụ agaghị enwe ego ha ga-ejegharị ọbụlagodi mgbe ihe malitere iji nwayọ mepee. Ọ gaghị adị mfe. Mana mgbe ihe a nile gasịrị, echere m na anyị nwere ọdịnihu dị mma.
N'ikpeazụ, okwu agbamume ọ bụla ị ga-ezi ndị mmadụ?
Ahụmịhe dị na Angel Hotel dị mma n'ihi na anyị nọrọ ebe a, mụ na ndị ọrụ m, dịka ezinụlọ. Anyị nwere otu WhatsApp ma na-agwa ibe anyị okwu ụbọchị niile. Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ihe ọ bụla - enyemaka ụfọdụ, nri, ihe sitere na ezinụlọ ha - ha nwere ike inweta ya. Anyị nwere ndị mmadụ na-arụrụ anyị ọrụ n'èzí ma anyị mere ka ndị ọbịa ahụ nwee mmetụta dịka ha nọ n'ụlọ ma nọrọ jụụ. Positivenọgide na-enwe nchekwube dị ezigbo mkpa.
Isi Iyi: Usoro Media Onye edemede: FELICE FRIEDSON NA CHARLES BYBELEZER
Kpụrụ MPI Director mbụ na ọdịnihu nke ụlọ ọrụ MICE
Ogige Ubi nke Sri Lanka: Post-COVID-19 Arụ Ọrụ Mmalite Ọhụrụ?